अनुसूची: सास अपोइन्टमेन्ट एकीकरण | Martech Zone
बुधबार, नोभेम्बर 30, 2011 बिहीबार, डिसेम्बर 1, 2011 Douglas Karr
यदि तपाईंले सुन्नु भएको छैन भने समयबद्धता, तपाईं गर्नुहुनेछ .. वा तपाईं चाँडै नै यसलाई प्रयोग गर्नुहुने छ! पहिले नै १ 15,000,००० प्रयोगकर्ताहरू सम्ममा, तालिकाले कुनै पनि व्यवसाय प्रदान गर्दछ जसले अनलाइन, फेसबुक र मोबाइल सजिलैसँग समाहित गर्न अपोइन्टमेन्टहरू सेट गर्दछ आत्म-तालिका तिनीहरूको व्यापार गर्न। प्रणाली धेरै किफायती छ ... एकल प्रयोगकर्ताका लागि प्रति महिना १ $ वा बहु प्रयोगकर्ताहरूको लागि users per month प्रतिमाह। कम्पनी एक वर्ष र आधा पहिले शुरू भएको थियो र सानो र मध्यम आकारको व्यापार मा केन्द्रित छ कि एक मजबूत र पूर्ण फीचरसेट छ।
तालिका ity 45 भन्दा बढी ठाडोमा कम्पनीहरूका लागि अपोइन्टमेन्ट सेटिंग पावर गर्दैछ, कुकुर हिड्नदेखि लिएर प्लष्टिकसम्म, नेल टेक्निशियनहरू र हेयर सैलुनहरूको लागि। सेवाको लोकप्रियता आफ्नै लागि बोल्छ, clients०% भन्दा बढी नयाँ ग्राहकहरू रेफरल मार्फत साइन अप गर्दछन् र प्रति हप्ता 60०० भन्दा बढी नयाँ ग्राहकहरू थपिएका छन्। सेवामा आश्चर्यजनक% 500% प्रतिधारण दर छ!
प्रमुख सुविधाहरू समावेश:
अनलाइन भेटघाट बुकिंग
फ्यानहरूलाई तपाइँको सिधा नियुक्तिहरू बुक गर्न अनुमति दिनुहोस् फेसबुक पेज.
एक पूर्ण मोबाइल ईन्टरफेस तपाइँको ग्राहकहरुलाई कुनै पनी समय, कहीँ पनि तपाई संग भेट बुकि to गर्न अनुमति दिन्छ।
कक्षा, कार्यशाला वा समूह घटनाहरू समर्थित छ, तपाईंलाई आफ्नो कक्षाहरू प्रबन्ध गर्न र भर्ने अनुमति दिदै।
तपाइँको ग्राहकहरुसँग कुराकानी गर्न प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ विशेष र पदोन्नतीहरू 75 XNUMX भन्दा बढी रंगीन, अनुकूलन टेम्प्लेटहरूको साथ। यसले अपोइन्ट मेसेजि appointmentलाई अपोइन्टमेन्ट रिमाइन्डरहरू थप्न सक्ने क्षमता समावेश गर्दछ!
अनुसूची छ ग्राहक सेवा, ट्यूटोरियल र सहयोगी उपकरण प्रयोगकर्ताहरूको विशाल समुदायसँग जसले सफल सुझावहरू साझा गर्न सक्दछ।
तालिकालाई ग्राहकको साइटमा कुनै स्थापित सफ्टवेयरको आवाश्यक पर्दैन, केवल दुईवटा स्क्रिप्ट ट्यागहरू जसले इन्टरफेस ल्याउँदछ ... ताकि तिनीहरू तपाईंको हालको वेबसाइटसँग मिनेटको केही अंशमा एकीकृत गर्न सक्दछन्। साथै, तिनीहरूसँग छ फेसबुक एकीकरण ताकि तपाईका अनुयायीहरू तपाईको तालिकामा क्लिक गर्न सक्दछन् र चाँडै फेसबुकबाट अपोइन्टमेन्ट गर्न सक्छन्:
तालिका केवल एक तालिका प्लेटफर्म मात्र होईन, यसले वास्तवमै तपाईंलाई खुला अपोइन्टमेन्टहरूको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ जस्तै यो ईन्भेन्टरी हो। व्यवसायहरूलाई मार्केटिंग उपकरणहरू प्रदान गरिन्छ तिनीहरूलाई मद्दतको लागि तिनीहरूका तालिका भर्न, पपअप प्रस्ताव सुविधा प्रयोग गरेर:
सौदा पदोन्नतिहरु पनि समाधानमा एकीकृत छन्।
यो को प्रतिज्ञा को एक महान उदाहरण हो समाधानको रूपमा सफ्टवेयर। आम जनतालाई एक मजबूत फीचरसेट प्रदान गरेर, अनुसूचीत्व व्यापार मालिकहरुलाई एक मजबूत र सस्तो उत्पादन प्रदान गर्न को लागी सक्षम छ। तालिकाले नयाँ ग्राहक रेफरल कार्यक्रम पनि सुरू गर्दैछ। नि: शुल्क परीक्षण खाताको लागि साइन अप गर्नुहोस् समयबद्धता.
टैग: नियुक्तिनियुक्ति आवेदनअनलाइन तालिकाअनलाइन तालिकातालिका
किन तपाईंले यो छुट्टी कार्ड पठाउनु पर्छ